Talooyin wax ku ool ah oo laga yaabo in laga yareeyo sida loo xakameyn karo emaylka aan loo baahnayn ee xisaabtaada Gmail
Ka helida emailada aan loo baahnayn iyo boggaga boggaaga Gmail waxay noqon kartaa wax yar xoqid. Gmail ayaa soo bandhigtay filtarrada waxtarka leh si ay uga hortagaan emaillada spam ee ka imanaya liisaska boostada iyo kuwa soo dira. Haddii aad heshay emailada spam, Gmail wuxuu kuu fududeynayaa inaad joojiso waraaqaha bogaga si joogto ah.
Ross Barber, oo ah 10 Semt khabiir, ayaa sheegay in sanadihii ugu dambeeyay, spamers iyo kuwa weerarka qaaday ay adeegsadeen emails si ay u xadaan macluumaadka kombiyuutarada dhammaadka ah - verio hosting cpanel. Haddii aad gujiso email bogsi ah oo ku saabsan koontadaada Gmail, waxaa laguu wareejin karaa bogga xaasidnimada ah ee shabakadaha khatarta ah ay si dhaqso ah u heli karaan macluumaadka dhaqaale iyo furahaaga. Waqtiga dheer, spameriyadu waxay sameeyaan lacag dhab ah oo ay bixiyaan hay'adaha sida lacag bixinta xayeysiinta. Emailka aan loo baahnayn maaha inay noqdaan mushkilad weyn oo saameynaysa ololehaaga internetka ama hawlgallada. U soo duubo emailada boguska ah waa uun yar oo yar yar iyadoo la yareeyo tirada emails aan loo baahnayn oo loo diro koontadaada.
Sida loo xakameynayo dadka isticmaala xisaabtaada Gmail adigoo isticmaalaya filtarada spam
Marka ay timaado ka hortagga emaylka spam ee xisaabtaada Gmail, adigoo adeegsanaya spam filter waa inay noqdaan fursada ugu horeysa ee aad ku fakartid. Spam filter ayaa tilmaamaya halka ugu badan ee emailadaada aan la rabin ay asal ahaan ka soo jeedaan emailada bogga emailka ah, baaxadda ay ku jirto emailka, iyo tirada guud ee dadka qaata emails eeysan jirin
Si aad u xakameyso emails iyo fariimeyaal bog leh oo ka imanaya xisbiyada gaarka ah ee ka imaanaya xisaabtaada Gmail, kaliya ku dar wareejinta liiskaaga Gmail-kaaga markaad hesho emailka aan loo baahneyn, calaamee oo riix 'fallo arrow 'oo lagu soo bandhigay dhinaca midigta midigta ee emailka bogus.
Xulo doorashooyinka la soo bandhigay ka dib markaad riixdo fallaadhaha hoose, oo guji 'Doorka Sender'. Mustaqbalka, dhammaan emailada aan la rabin ee ka soo horjeedka xannibaadda waxay si toos ah ugu gudbinayaan galka 'junk'. Nasiib wanaag, Gmail wuxuu ku siinayaa fursad aad ku furto soo dirayaasha si khalad ah u xiran.
Tricks oo ku saabsan sida loo soo sheego emaylka spam
Markaad ogaato emailka spam ee xisaabtaada Gmail, uma baahnid inaad argagaxto. Riixidda calaamadda jeegga ee ku yaal liiska emaylka ama isticmaalida fiilooyinka ayaa bixiya xalka ugu fiican. Google waxay isticmaashaa warbixinno ay soo gudbiyeen dadka isticmaala dhammaadka si ay u nadiifiyaan shaashadda spam oo ay u sii fiicnaadaan. Spam filter ayaa keena natiijooyinka ugu fiican. Si kastaba ha noqotee, waraaqaha qashinka qaarkood waxay mar walba helayaan hab lagu galo xisaabtaada Gmail. Si aad u soo sheegto emails qashin ah oo laguugu soo diray koontadaada, riix 'fallaadh hoose' oo lagu soo bandhigay dhinaca midigta ee booska junkada la helay.
Ku dhaji liiska xulashooyinka ku hoos jira fallaadhaha hoose oo riix 'Options spam'. Kadib markaad calaamadayso ama aad soo dirto fariimo iyo emeelyo, nuxurka qashinka waxaa loo diraa 'folder of junk.' Hayso xayiraadda iyo soo wargalinta emails aan loo baahnayn Gmail oo yareyneysa tirada feylasha qashinka ah ee laguu diray adiga oo isticmaalaya spamka iyo kuwa weerarka geystay
Gmail wuxuu si aad ah ugu tiirsan yahay ammaanka koontadaada Gmail. Ha u ogolaan in sanduuqaaga la geliyo faylasha qashinka iyo emayl aan loo baahnayn. Iska ilaali inaad u hesho emails fariin ka soo dirayaasha gaarka ah adoo ku daraya liiskaaga liiskaaga. Soo-dirayaasha soo-celinta ee kuxiran liiskaaga liiskaaga ayaa si khalad ah loo samayn karaa adigoo gujinaya 'fallaadhaha hoose' oo guji 'ikhtiyaar' doorasho